प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर देउवाले झपारे, हस् ! हुन्छ भन्दै फर्किए प्रचण्ड — Imandarmedia.com
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बाबुवाटारमा बोलाएर झपारेका छन् । मन्त्रीहरुको नामावली दिन ढिलाई गरेको भन्दै प्रचण्डलाई देउवाले बालुवाटारमै बोलाएर झपारेका हुन् ।
‘तपाईँ मलाई असफल बनाउन खोज्ने ? सरकार बनेको ४७ दिन बितिसक्यो । किन मन्त्रीको नाम दिनु भएन् ।’ देउवाको भनाई उढृड गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘पहिला माधव नेपाललाई कुर्नुहोस् भन्नुभयो । नयाँ पार्टी बन्दा पनि किन ढिलाई । अरे वावा छिटो गर्नुहोस् ।’
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुको नाम छिटो टुंगाउन आग्रह गरे । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई पनि छिटो टुंग्याउन पहल गर्न प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए । आज हुने भनिएको मन्त्रीपरिषद विस्तार नहुने भएको छ । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्री छान्न नसक्दा मन्त्रीपरिषद विस्तार रोकिएको हो ।
तर, ती नेताले विवादका बीच पनि मापदण्ड बनाएर नाम टुंग्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसक्यौं, व्यक्तिव्यक्तिका अनुहार हेर्ने हो भने सबै उस्तै देखिन्छन्, त्यसकारण मापदण्ड बनाउने र टुंग्याउने भन्नेछ, त्यसो गर्दा विवाद पनि कम हुन्छ,’ ती नेताले भने ।
आज बिहानैदेखि नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ । मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा देशभरका दुई करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ता प्रभावित भएका छन् ।